ကြှနျမကို ထားခဲ့တဲ့သူ … – Shinyoon
ကြှနျမကို ထားခဲ့တဲ့သူ …
တှဆေုံ့ကွုံကှဲ ဖွဈမွဲဓမ်မတာ ဆိုတဲ့ အရာတှထေဲမှာ ကြှနျမရဲ့ အခဈြရေးဟာလဲ မမွဲခွငျးထဲမှာပါခဲ့တယျ ။ သူ လှလှလေးတှေ ပွုံးတတျတယျ ။ ခြိုခြိုသာသာလေးတှေ ပွောတတျတယျ ။ ပွီးတော့ ဂရုစိုကျပွရငျး ကြှနျမ အခဈြကို ယူခဲ့တယျ ။
တှဲထားတဲ့လကျတှကေို မွဲစခေငျြတဲ့စိတျနဲ့ သူက စခဈြခဲ့တဲ့ ဒီဇာတျလမျးမှာ ကြှနျမ ဆကျပွီးခဈြခဲ့မိတယျ ။ တငျးလှနျးရငျပွတျတတျတယျ တဲ့ … အဲ့ဒီအတှေးနဲ့ပဲ ကြှနျမ ကိုယျ့ဘကျက ဦးအောငျ လြှော့ခဲ့မိတာတှလေဲ အခါခါပါ ။
တောငျးပနျစရာမလိုပဲ ခှငျ့လှတျပေးခဲ့တာကို ရတှေကျရငျ … မဆုံးနိုငျဘူး ။ ခဈြလာမမေးပဲ ခဈြတယျ ပွောခဲ့မိတာတှလေဲ အကွိမျပေါငျးမနညျးဘူး ။ သူဂရုမစိုကျတဲ့အခါ ကြှနျမ ဘကျ အရငျ ဂရုစိုကျပေးခဲ့တာလဲ အခါခါပါ ။
အဲ့ဒီနမှေ့ာတော့ … ကြှနျမ မကျြရညျတှကေနြတောကို လဈြလြူရှုခဲ့ပွီး လကျတှဲတှေ ဖွုတျခဲ့တယျ ကြှနျမဆှဲထားတဲ့လကျတှကေို မကျြကှယျပွုပွီး ကြောခိုငျးသှားခဲ့တယျ ။ ကြှနျမ ပဲ မခဈြတတျခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတျ ကြှနျမ ခဈြကွောငျး မပွတတျခဲ့တာလားပေါ့ ။
ကြှနျမကို ထားခဲ့သူကို နာစရာတှေ အမြားကွီးထဲကမှ လှမျးနမေိသေးတယျဆိုရငျ ကြှနျမကို ရူးတယျလို့ ပွောခငျြလဲ ပွောပါ ။ ပွနျလာပါစဆေိုတဲ့ ဆုတှေ မတောငျးပဲ သူပြျောပါစဆေိုတဲ့ မတ်ေတာတှပေို့နတေဲ့ ကြှနျမသညျလညျး ကိုယျ့စိတျကိုယျ ဘယျလို ဖွသေိမျ့ရမလဲ မသိခဲ့ဘူး ။ သူ …. ကြှနျမကို ထားခဲ့တဲ့သူ ပြျောပါစပေေါ့ ။
ကျွန်မကို ထားခဲ့တဲ့သူ …
တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဖြစ်မြဲဓမ္မတာ ဆိုတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ရေးဟာလဲ မမြဲခြင်းထဲမှာပါခဲ့တယ် ။ သူ လှလှလေးတွေ ပြုံးတတ်တယ် ။ ချိုချိုသာသာလေးတွေ ပြောတတ်တယ် ။ ပြီးတော့ ဂရုစိုက်ပြရင်း ကျွန်မ အချစ်ကို ယူခဲ့တယ် ။
တွဲထားတဲ့လက်တွေကို မြဲစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ သူက စချစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျွန်မ ဆက်ပြီးချစ်ခဲ့မိတယ် ။ တင်းလွန်းရင်ပြတ်တတ်တယ် တဲ့ … အဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပဲ ကျွန်မ ကိုယ့်ဘက်က ဦးအောင် လျှော့ခဲ့မိတာတွေလဲ အခါခါပါ ။
တောင်းပန်စရာမလိုပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တာကို ရေတွက်ရင် … မဆုံးနိုင်ဘူး ။ ချစ်လာမမေးပဲ ချစ်တယ် ပြောခဲ့မိတာတွေလဲ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းဘူး ။ သူဂရုမစိုက်တဲ့အခါ ကျွန်မ ဘက် အရင် ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တာလဲ အခါခါပါ ။
အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ … ကျွန်မ မျက်ရည်တွေကျနေတာကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး လက်တွဲတွေ ဖြုတ်ခဲ့တယ် ကျွန်မဆွဲထားတဲ့လက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ် ။ ကျွန်မ ပဲ မချစ်တတ်ခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မ ချစ်ကြောင်း မပြတတ်ခဲ့တာလားပေါ့ ။
ကျွန်မကို ထားခဲ့သူကို နာစရာတွေ အများကြီးထဲကမှ လွမ်းနေမိသေးတယ်ဆိုရင် ကျွန်မကို ရူးတယ်လို့ ပြောချင်လဲ ပြောပါ ။ ပြန်လာပါစေဆိုတဲ့ ဆုတွေ မတောင်းပဲ သူပျော်ပါစေဆိုတဲ့ မေတ္တာတွေပို့နေတဲ့ ကျွန်မသည်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဘယ်လို ဖြေသိမ့်ရမလဲ မသိခဲ့ဘူး ။ သူ …. ကျွန်မကို ထားခဲ့တဲ့သူ ပျော်ပါစေပေါ့ ။
လူတဈယောကျကို မဖေို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ